एप्पल वाच | बिरामीहरूमा नयाँ कार्डियोलोजी अध्ययन प्रकाशित गरियो म म्याकबाट हुँ
एप्पल वाचको साथ बिरामीहरूमा गरिएको नयाँ कार्डियोलोजी अध्ययन प्रकाशित गरियो
एप्पल वाच अहिलेको लागि जारी गरिएको थियो छ वर्षत्यहाँ पहिले नै मसँगै व्यक्तिहरूको एक महत्त्वपूर्ण समूह छ, जो गर्वसाथ भन्न सक्छन् कि हामी जीवित छौं भन्ने तथ्यलाई धन्यबाद दिन्छौं कि हामीले हाम्रो जीवनको कठिन समयमा हाम्रो कलाईमा एप्पल घडी लगाएका थियौं।
सबैजनालाई एप्पल उपकरणहरूले औषधिको साथ रहेको स्थिर सम्बन्ध थाहा छ, प्रत्येक नयाँ संस्करणको साथ, तिनीहरूले हामीलाई राम्रो स्वास्थ्यको आनन्द लिन केही थप मद्दत गर्छन्। अब भर्खर हृदयको नयाँ चिकित्सा अध्ययन प्रकाशित भएको छ जसको लागि Apple Watch.
अप्रिलमा एक बिहान, मेरो एप्पल वाचले यसको कम्पनले मलाई जगायो मलाई कम मुटुको दरमा सचेत गराउँदै। चिह्नित २ be धडकन प्रति मिनेट तीन घण्टा पछि उनीहरू मेरो महत्वपूर्ण संकेतहरू अस्पतालको आईसीयूमा पुन: प्राप्त गर्न सक्षम भए। अर्को दिन, मेरो मुटुको शल्यक्रिया भयो र एक पेसमेकर सम्मिलित गरियो ताकि मसँग त्यो बिहान जस्तो अर्को "कम" फेरि नहोस्। घण्टी द्वारा सुरक्षित गरियो ... मेरो एप्पल वाचबाट।
र यो कथा मेसाचुसेट्सको मानिस वा ओहायोकी एउटी महिलालाई भएको थिएन, हामी प्रायः समय-समयमा पढ्छौं, तर यो भयो एक सर्भर। धेरै चोटि मैले सोचेको छु के हुन्छ होला यदि म मेरो एप्पल वाच सुतेको बानी भएको छैन भने। म शायद अहिले सम्म उठेको थिएन।
त्यसकारण म सँधै एप्पल वाच र यसका फाइदाहरूका स्वास्थ्यका लागि सम्बन्धित समाचारहरूमा विशेष ध्यान दिन्छु। द्वारा एक नयाँ अध्ययन स्ट्यानफोर्ड अस्पताल मा प्रकाशित गरिएको छ PLoS One यो हप्ता।
1 ११० बिरामीहरूलाई अनुगमन गरियो
2 आश्चर्यजनक डाटा प्राप्त भयो
११० बिरामीहरूलाई अनुगमन गरियो
बिरामीहरूको जनसांख्यिकीय विशेषताहरू अध्ययन गरे।
यो अध्ययन प्रयोग भएको छ २ patients बिरामीहरू मुटु सम्बन्धी समस्याका साथ ती सबैलाई एप्पल वाच र आईफोनसँग उनीहरूको घरबाट अनुगमन गरिएको छ र यसको लागि डिजाइन गरिएको विशेष अनुप्रयोग।
उही डेटा बाट सुझाव छ कि यी उपकरणहरु आश्चर्यजनक शुद्धता संग हृदय रोगीहरु को मोटर फ्रेटिल निगरानी गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। क्लिनिक भ्रमणको क्रममा एप्पल उपकरणहरू द्वारा डाटा द्वारा तुलनाको आधार प्रदान गर्न यस्तै जाँचहरू गरिएको थियो घर.
अध्ययनमा,-मिनेट पैदल परीक्षण (M एमडब्ल्यूटी) मा प्राप्त डाटाको मूल्या were्कन गरियो, साथै परीक्षणको पूरक वा प्रतिस्थापन गर्न निष्क्रिय डेटा संकलन गरियो। M मेगावाट हृदय रोगहरूको बिरामीहरूमा अस्पतालमा।
एप्पल वाच द्वारा लिइएको पठन र क्लिनिक, अध्ययनले पत्ता लगाउन सक्षम भयो कि एप्पल पहिरिन योग्य बिरामीहरूको कार्यात्मक क्षमता मापन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
आश्चर्यजनक डाटा प्राप्त भयो
अध्ययनका अनुसार एप्पल वाच सहि आकलन गर्न सकीन्छ 90% संवेदनशीलता र 85% विश्वसनीयता को साथ एक बिरामी को कार्यात्मक क्षमता।
निरीक्षण गरिएको अस्पताल वातावरण अन्तर्गत, भास्कट्र्याक अनुप्रयोगको साथ आईफोन र एप्पल वाचले '०% को संवेदनशीलता र 90 85% को विशिष्टताका साथ व्यक्तिको' कमजोर 'सहीको आकलन गर्न सक्षम थिए। एक unsupervised सेटिंग मा अस्पताल बाहिर, 6MWT बाट प्राप्त डाटाaथियो % 83% भरपर्दो.
बिरामीको घरमा जम्मा गरिएको निष्क्रिय डाटा क्रमशः ०..6 र ०.0,643 र ०.0,704 को वक्र (ए.यू.सी.) अन्तर्गत क्षेत्र क्लिनिकमा सम्पन्न। एमडब्ल्यूटी परीक्षणमा प्राप्त डाटाको कार्यात्मक क्षमताको पूर्वानुमानमा झन्डै सटीक थियो।
अध्ययन अन्तमा निष्कर्षमा पुगेको छ कि एप्पल वाच र आईफोन को संयोजन को लागी नियमित भ्रमण को आवश्यकता बिना दूर दूर बाट मुटु डेटा मापन गर्न को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। अस्पताल.
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल उत्पादनहरू » Apple Watch » एप्पल वाचको साथ बिरामीहरूमा गरिएको नयाँ कार्डियोलोजी अध्ययन प्रकाशित गरियो
डिमांड एप्पल ब्राजील, स्क्रिनको साथ होमपड र अरू धेरै। म्याकबाट मा हप्ताको सर्वश्रेष्ठ
हामी पहिले नै डार्क भन्दा पहिले घरको दोस्रो सत्रको प्रीमियरको मिति जान्दछौं